बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिँदै, अर्थमन्त्रीले आजै जवाफ दिने - बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिँदै, अर्थमन्त्रीले आजै जवाफ दिने
बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिँदै, अर्थमन्त्रीले आजै जवाफ दिने
२०७6, २३ जेठ, 10:08:11 AM
काठमाडौं । बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल बिहीबार ‘आज’ सकिँदैछ । आइतबारदेखि सुरु भएको छलफलमा बिहीबार केही सांसदहरुले धारणा राखेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जवाफ दिने कार्यसूची तय भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठक अहिले ‘बिहान ११ बजे’ बस्दै छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री युवराव खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का संघीय संसदमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
मंगलबारसम्म बजेटको सैद्धान्तिक पक्षमाथि एकसय भन्दा बढी सांसदहरुले बोलेका छन् । धारणा राख्ने क्रममा सत्ता पक्षका सांसदले बजेटको अन्धो समर्थन गरेका छन् भने विपक्षी सांसदहरुले खरो आलोचना गरेका छन् । बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल शुक्रबारदेखि गर्ने तयारी गरिएको छ ।
कांग्रेसका छायाँ मन्त्रीले पाए नियुक्ति पत्र, कुन मन्त्रालयको छायाँ मन्त्री को ?
‘समाजवाद उन्मुख’ बजेटको निर्दलीय चरित्र !
बजेटमाथि छलफल आजबाट : अर्थनीतिमा रङरोगन गरेर ल्याएको कांग्रेसको धारणा
राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मकाको तलब कति ?